Muxuu wasiir Dhuxulow ka sheegay shir uu uga qeybgalay Imaaraadka Carabta? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muxuu wasiir Dhuxulow ka sheegay shir uu uga qeybgalay Imaaraadka Carabta?
A warsame 9 December 2014 9 December 2014
Abu Dhabi, 09 December 2014: Siihayaha Wasiirka Warfaafinta, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa maanta khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee Warbaahinta oo ka dhacay Abu Dhabi, kaas oo ay isagu yimaadeen khubarada Warbaahinta caalamka oo looga arinsanayey sidii loo diyaarin lahaa curin cusub oo ku wajahan la dagaallanka argagaxisada. waxaana mar uu ka hadlayey shirka uu yiri “Waa inaan dhalinyarada si buuxda u taageernaa si ay uga qeybgalaan siyaasadda iyo dimoqraadiyadda Soomaaliya.”
Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ka hadlayey shirka ayaa yiri “Waxaan aad ugu faraxsanahay muhiimadda gaarka ah ee la siiyey warbaahinta marka ay timaado in lala dagaalo xagjirnimada iyo argagaxisada. Warbaahinta waa muhiim waxeyna u baahan tahay in caalamku uu taageero warbaahinta Soomaaliya, oo horumar ballaaran ku tallaabsatay. Sababta aan Soomaaliya warbaainta aan xoooga u saareyno ayaa ah inaan ku guuleysano hanashada iyo kalsoonida shacabka oo muhiim u ah Soomaaliya. Waayo, marka ay shacabka aaminaan in dowladda ay wax u qabaneyso ayaan oran karnaa waan hanan karnaa kalsoonida shacabka.”
Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa hadalkiisa ku soo gabogabeeyey “Waan fahamsanahay ahmiyadda iyo muhiimadda dhalinyarada iyo sida loogu baahan yahay in wax loola qabto. Waa inaan shaqo u abuurnaa dhalinyarada, waana inaan xirfado shaqo barnaa iyo waxbarasho tayo leh. Waana inaan ku dhiiri gelinaa sidii ay uga qeybqaadan lahaayeen siyaasadda iyo dimoqraadiyeynta Dalka. Sidoo kale waxaan horumarinaa tayada warbaahinta gaarka loo leeyahay, waxaana dhiiri gelinaa bulshada rayidka iyo doorkooda ku aadan horumarinta dhalinyarada.”
Kenya oo Soomaaliya u gacan gelisay wariye Alshabaab ah